La kulan EZVIZ eLife, kamaradda wifi oo leh batari aad u weyn | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Qalabka kale
Maxaad dhihi lahayd waa aaladda ku xiran taleefannadeena casriga ah ee ugu horumarsan iyo horumarrada muddooyinkii dambe? Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso qaar kale, laakiin shaki la'aan, kamaradaha ilaalada guriga ayaa ka mid ah badeecooyinka ugu caansan. Maanta waxaan ka hadleynaa kamarada EZVIZ NOLOSHA iyo wax kasta oo ay na siin karto. A kamaradda ilaalinta wifi in aan 100% ku xakameyn karno mobiladayada, EZVIZ eLife.
Haysashada nidaam amni oo guriga ah qof walba ma heli karo. Kharashka rakibidda, oo aan ku xusin khidmadaha billaha ah, inta badan xitaa ma soo baxaan. Laakiin fikraddan ayaa si aad ah isu beddeshay waqtiyadan dambe. Waad ku mahadsan tahay aaladaha noocan ah, waxaan ku xisaabtami karnaa nidaam amni oo casri ah iyadoon loo baahnayn maalgelin sare.
1 Sidee ayuu EZVIZ eLife u shaqeeyaa?
2 Maxay EZVIZ eLife na siin kartaa?
3 Kani waa kamaradda ilaalada batariga EZVIZ eLife
Sidee ayuu EZVIZ eLife u shaqeeyaa?
El shaqeynaya kaamirooyinka noocan ah ayaa ah aad uga fudud sida aan malayn karno. Dhab ahaantii, si dhib leh uma baahnno qaabeyn habboon, maadaama mahadsanid App dhammaystiran oo dhammaystiran, waxaad ka isticmaali kartaa min hal daqiiqo adiga oo aan aqoon hore u lahayn. Shabakadda Wi-Fi ee guriga Waxay caawin doontaa casrigayaga, meel kasta oo aan joogno, xafid la xiriir mar walba kaamerada.
Soo qaado EZVIZ NOLOSHA on Amazon qiimaha ugu fiican
Iyada oo la adeegsanayo arjiga iyo iskaanka lambarka Qr ee aan ka helno kamaradda lafteeda ayaan ku dari karnaa. Marna App -ka waxaan ugu adeegsan karnaa awood buuxda. Waan qaban karnaa duubista xitaa habeenkii iyada oo ay ugu wacan tahay aragtida habeenka midabka horumarsan. Waxaan leenahay dhawaaqa labada dhinac ah sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa makarafoonkeeda iyo af -hayeenkiisa waxaan la falgali karnaa meel fog.
Maxay EZVIZ eLife na siin kartaa?
La batteriga gudaha kaamirada EZVIZ waa mid ka mid ah awoodaha ka dhigaya mid gaar u ah baaxadeeda. Waxaan wajahaynaa mid ka mid ah xulashooyinka yar ee aan ka helno suuqa oo aan adeegsan karno fiilooyin la'aan. Waxay leedahay batteriga 7800 Mah bixiya cajiib ah ismaamul ilaa 210 maalmood looma baahna in lacag la bixiyo.
Intaa waxaa dheer, EZVIZ eLife waxay kaloo na siisaa awooddeeda kaydinta, waxayna leedahay 32GB xusuusta gudaha halkaas oo aan ku kaydin karno sawirrada sawir ama fiidyow ee aan u baahan nahay. iyada qalabka dhaqdhaqaaqa iyo tiknoolajiyadda ogaanshaha qaabka aadanaha ee horumarsan waxay naga dhigi doontaa inaan si buuxda gacanta ugu hayno gurigeenna ama meheraddeenna.
Isdhexgalka EZVIZ eLife iyo taleefankeena gacanta waa mid deg deg ah oo hufan. Haddii kamaradu ogaato dhaqdhaqaaq kasta laga shakiyo, si toos ah sawir qaado oo noo soo dir ogeysiis. Waxaan sidoo kale ku duubi karnaa kamaradda lafteeda farriin ka hortag ah oo si otomaatig ah loo ciyaaro ama meel fog laga maqlo. Waxa kale oo waxtar leh in taas la ogaado Alexa ayaa naga caawin karta inaan xitaa fududeyno adeegsiga. Iyada oo leh amarrada codka ee aaladdayada waxaan ku kicin karnaa ama joojin karnaa amarada, waxaan ciyaari karnaa farriin horay loo duubay ama qabsan karnaa waqtiga la rabo.
EZVIZ eLife waa a qalab aad u fiican oo lagula socdo meherad, xafiis, bakhaar, guri gaar ahaan ... Laakiin ma aha inaan ka walwalno cimilada xun sida ay tahay loo qaabeeyey loona diyaariyey inay iska caabbiyaan biyaha iyo boodhka waxayna u leedahay a Shahaadada IP66. Tayada duubista sawirka HD Full Fiidiyowga aan haysanno mar kasta oo fiirinaya casrigayaga iyada oo aan loo baahnayn qayb dheeri ah.
Kani waa kamaradda ilaalada batariga EZVIZ eLife
Waxaan helnay kamarad ilaalin taas waxaan u isticmaali karnaa labadaba gudaha iyo bannaanka iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeynteeda, tayada alaabteeda iyo iska caabbintooda. iyada dhululubad iyo midabada la doortay, cawl iyo madow, waxay bixiyaan muuqaal ah wax soo saar tayo leh, wax aan xaqiijinno marka aan gacmaha ku hayno. Waxay leedahay miisaan, taas oo in kasta oo laga yaabo inay xoogaa sarreyso, haddana waxaan u tixgelin karnaa "caadi" laakiin waxaa si fiican u haysa taageerada la xirxiray ama magnetized -ka.
Shirkadda EZVIZ waxay bixisaa suurtogalnimada xeedho qoraxda oo aan ku rakibi karno kaamerada dhinaceeda markaa uma baahnin inaan ka saarno mar walba taageeradeeda. Waxaan ku dhejin karnaa gidaarka annagoo adeegsanayna a taageero magnetized awood badan laakiin fudud in la rakibo. Markaa markaan u baahanahay inaan ku dallacno batteriga waxaan kaliya ka saari doonnaa birlabka, ku xirnaa waqtiga lagama maarmaanka ah dekadda USB Type C, oo aan mar kale ku raaxeysanno madaxbannaanideeda cajiibka ah.
Haddii aad hore u go'aansatay inaad guriga ku haysato nidaam amni, oo aadan rabin inaad lacag badan bixiso, soo iibso EZVIZ NOLOSHA on Amazon qiimaha ugu fiican ee la heli karo. Oo ku raaxayso farsamada oo dhan maxaa awood u leh inuu na siiyo si gurigaaga ama meheraddaadu u noqoto mid ammaan ah oo la ilaaliyo mar walba. Waad yeelan kartaa amnigaas dheeraadka ah ee aad raadinayso iyadoon loo baahnayn khidmadaha billaha ah iyo leh runtii hawlgal fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » La kulan EZVIZ eLife, kamaradda wifi oo leh batari aad u weyn